मनमनै जप्नुहोस् यो मन्त्र, ‘दुःख’ टाढा हुनेछ तपाईले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि कालसर्प योगका कारण कतिसम्म कष्टदायी हुन्छ भनेर ? यो योगबाट पीडित व्यक्तिलाई एक मात्रै हैन अनेकन खालका कष्ट र पीडा हुन्छन् । कालसर्प योगबाट पीडित व्यक्तिको जीवन कुन्ठाले भरिएको हुन्छ । कालसर्प योगबाट पीडित व्यक्तिले त्यसबाट छुटकरा पाउ... पूरा पढ्नुहोस्
‘हरडहुवा’ पर्वको उल्लासले कोरोना त्रास भुलाउँदै, थारु बस्तीमा चहलपहल कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६ बेनौली गाउँस्थित विभिन्न टोलमा असार २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म हरडहुवाको उल्लास थियो । स्थानीयले खेतीपातीमा गरिएको कष्टपछि आपसमा मिठो मसिनो खाएर सामूहिक रुपमा रमाइलो गरे । यतिबेला मानव समुदायमा महामारीको रुपमा फैलिएक... पूरा पढ्नुहोस्
मुहार फेर्दै कर्णालीको दीपेश्वर धाम कर्णाली प्रदेशको पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिकास्थित भेरी कर्णालीको संगमस्थल दोभान तीर्थ पर्यटनका रुपमा फड्को मार्दैछ । हिन्दूको आस्थाको केन्द्रविन्दु रहेको भारतको गया र वनारस लगायत तीर्थस्थलका नदीमा डुबुल्की मार्दै पितृ आत्माको शान्तिको कामना गर्ने नेपाली धेरै द... पूरा पढ्नुहोस्
हिन्दू धर्ममा यसरी शुरुवात भयो गोत्रको, तपाईंको कुन ? सनातन धर्ममा गोत्रको धेरै महत्व हुन्छ । ‘गोत्र’को शाब्दिक अर्थ त धेरै व्यापक हुन्छ । यद्यपि विद्वानहरूले समय–समयमा यसबारे यथोचित व्याख्या गरेका छन् । ‘गो’ अर्थात् इन्द्रीय, र ‘त्र’ आशय हुन्छ ‘रक्षा गर्नु’ । अतः गोत्रको... पूरा पढ्नुहोस्
वास्तुशास्त्र : विहान उठेपछि उत्तर दिशातर्फ केही पाइला किन हिड्नु पर्छ ? विहान उठ्नासाथ धर्ती(पृथ्वी)मा टेक्नुभन्दा पहिला धर्ती(पृथ्वी) लाई प्रणाम गर्न सल्लाह दिन्छ । किनकी धर्ती हाम्रो पालनकर्ता हो । हाम्रो जीवनका लागि सबै आवश्यक पदार्थ धर्तीले नै हामीलाई उपलव्ध गराउँछ चाहे पानी या भोजन । त्यसैले धर्तीको सम्मान गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । ... पूरा पढ्नुहोस्
किन द्रौपदीले पाँच पति पाइन् ? महाभारतकी अमर पात्र द्रौपदी आफ्ना पाँच पतिका कारण सधैं विवादमा रहिन् । बहुपति प्रथालाई स्वीकार नगर्ने समाजमा द्रौपदीको कदम क्रान्तिकारी थियो जसका कारण उनीमाथि अनेकौं लाञ्छना लागे । हुन त द्रौपदीले अर्जुनसँग मात्र विवाह गरेकी हुन् तर उनको सम्बन्ध अर्जुनका दाजुभाइसँग ह... पूरा पढ्नुहोस्
एकाबिहानै ॐ उच्चारण गर्दा हुन्छ फाइदै फाइदा एकाबिहानै उठेर ॐ उच्चारण गर्ने व्यक्तिलाई आनन्दको अनुभव हुन्छ । ॐकारको उच्चारणले स्वास्थ्यलाई पनि धेरै फाइदा पु–याउँछ । ॐका फाइदाहरूको चर्चा गर्नुअघि यसमा निहित वर्णहरूको कुरा गरौं । ॐ तीन वर्णबाट बनेको छ र तीनैको आआफ्नै अर्थ छ । अ को अर्थ उत्पन्न हुनु, उ ... पूरा पढ्नुहोस्
साउन महिनामा सुनसान पशुपतिनाथ क्षेत्र चान्द्रमासअनुसार असार २२ गते सोमवारदेखि श्रावण कृष्णपक्ष शुरू भएको छ । प्रत्येक वर्ष साउन महिनामा पशुपति क्षेत्रमा लाखौं भक्तजनको भीड लाग्ने गर्छ । यस वर्ष चान्द्रमासअनुसार साउन महिनाको तेस्रो दिन बित्दासमेत पशुपति क्षेत्र सुनसान छ । पशुपति क्षेत्रमा शिवका भजन, आराधनाका ... पूरा पढ्नुहोस्
माइग्रेनको समस्या छ ? यी घरेलु उपाय अपनाएर भगाउनुस् तपाईंले बेस्सरी टाउको दुख्ने माइग्रेन रोगका बारेमा त पक्कै सुन्नुभएको होला । विश्वभरिमा एक अर्ब व्यक्ति माइग्रेनबाट ग्रस्त छन् । कुनै माइग्रेनमा हल्का मात्र टाउको दुख्छ भने कुनै माइग्रेनमा चाहिँ टाउको फुट्ला झैं गरी दुख्छ । माइग्रेन दिमागको एक भागमा मात्र हुन्छ र यो दुई घ... पूरा पढ्नुहोस्
रावण र दुर्योधनका पत्नीले पति मरेपछि गरेका थिए अनौठो काम ! हिन्दूहरूको पवित्र ग्रन्थ रामायण र महाभारतमा धर्म र मुक्तिको कुरा मात्र नभई तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थाको जानकारी पनि पाइन्छ । यी ग्रन्थमा नायिकाहरूलाई पतिव्रता देखाइएको छ भने खलनायकका पत्नीहरूको बारेमा अनौठो कुरा लेखिएको छ । विशेषगरी रावण र दुर्योधनका पत्नीले पतिको म... पूरा पढ्नुहोस्
के हो श्रीकृष्णका १६ हजार पत्नीको रहस्य ? भगवान् कृष्णका अनेकौं लीलामध्ये सोह्र हजार पत्नीहरूको प्रसंग पनि आउँछ । कसरी श्रीकृष्णले सोह्र हजार पत्नीसँग विवाह गर्नुभयो त ? पौराणिक कथाहरूका अनुसार एक दिन देवराज इन्द्रले भगवान् श्रीकृष्णलाई प्राग्ज्योतिषपुरका दैत्यराज भौमासुरको अत्याचारका बारेमा अवगत गराए । इन्द्रको ... पूरा पढ्नुहोस्
गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइदै महोत्तरीसहितका मिथिला क्षेत्रमा आज गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइँदै छ । असार पूर्णिमाका दिन आज गायत्री, दीक्षा, वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा दिने गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइँदै गरिएको हो । पर्वमा गुरुप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नयाँ वस्त्रआभूषण फेराउन... पूरा पढ्नुहोस्
गोद्ना संस्कृति : युवायुवतीको शरीरमा देखिने ट्याटुभित्र लुकेको यौन र प्रेमको अन्तर्य पछिल्लो समय युवतीहरू वक्षस्थल, नाइटोलगायत अंगमा ट्याटु खोप्छन् । युवाहरूले पाखुरा, पिठ्यु लगायत अंगमा ट्याटु खोपेको देखिन्छ । ट्याटुको क्रेज ग्रामीणभन्दा शहरीया युवायुवतीमा बढी रहेको पाइन्छ तर ट्याटुको तात्पर्य तथा विशेषताबारे आजका पुस्ता जानकार छन् ? नवपुस्ता ट्याटु... पूरा पढ्नुहोस्
जान्नुहोस् श्रीमद्भगवद्गीता सम्बन्धी केही तथ्य श्रीमद्भगवद्गीता हिन्दूहरूको पवित्रतम ग्रन्थमध्ये एक हो । यसमा जीवनको सार खिँचिएको छ । यसको अनुशीलनले जीवन निर्वाहमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ । भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिएको उपदेशमा जीवनको अर्थ विस्तारपूर्वक बुझाइएको छ । ईसापूर्व ३१३७ मा भगवान् श्रीकृष्णले कुरुक्षेत्... पूरा पढ्नुहोस्
विवाह अघि अनिवार्य थाहा पाउनुस् ​पार्टनरका बारेमा यी पाँच कुरा राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्&zwj;ले बालक चन्द्रगुप्&zwj;त मौर्यलाई समूचे भारतवर्षका सम्राट बनाएका थिए। उनका नीति शासनका लागि मात्र नभइ मनुष्यकाे जीवनकाे लागि पनि महत्वपूर्ण रहे। चाणक्यले आफ्ना नीति शास्त्रमा जीवनसाथी राेज्ने&nb... पूरा पढ्नुहोस्
महाभारत युद्ध हुँदा कृष्ण भगवान ९० वर्षका थिए, तर देखिए जवान भगवान कृष्णको कर्मयोग र ज्ञानयोग वारेको ज्ञानलाई महत्वका साथ लिइने गरिएको छ । कृष्ण भगवानका विभिन्न रुप देख्नु भएको होला तर के तपाईले कहिल्यै कृष्णको बृद्धाअवस्थाको फोटो देख्नु भएका छ ? सायद तपाईले भगवान कृष्णका कुनै पनि चित्र तथा मूर्तिहरु देख्नुभएको छैन, जसमा उ... पूरा पढ्नुहोस्
विकृतियुक्त पुरोहितवादमा किन अल्झेको छ समाज ? पुरोहितवाद वैदिक युगसँगै उदय भएको वाद हो । वैदिक ग्रन्थमै यस विषयलाई लिएर महर्षिद्वय वशिष्ठ र विश्वामित्रबीच व्यापक मतभेद भेटिन्छ । गायत्री उपासक विश्वामित्र ब्रह्मवादी थिए । (ऋग्वेद ३।६२।१०) कर्मकाण्ड प्रेमी वशिष्ठ पुरोहितवादी थिए । सूर्यवंशी राजा हरिश्चन्द्रको यज्ञसम्म आइ... पूरा पढ्नुहोस्
हिन्दू धर्ममा किन चढाइन्छ सूर्यलाई जल ? हिन्दू धर्ममा वेद, पुराण र ग्रन्थहरूको महत्त्व बताइएको छ । यी ग्रन्थहरूले हामीलाई सही मार्गप्रदर्शन गर्छन् । यी शास्त्रहरूमा दिनदिनै बिहानीपख सूर्यलाई जल चढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सूर्य सबै ग्रहका स्वामी हुनुहुन्छ र सूर्यलाई नियमित जल चढाउँदा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ र उहा... पूरा पढ्नुहोस्
बिहानै उठेर यसो गरे कमाइन्छ टन्नै पैसा बिहान उठेपछि क्रमशः यसो गर्नुभयो भने तपाईंलाई धनलाभ लगायतका फाइदा हुन्छन् । बिहान निद्रा खुल्नेबित्तिकै इष्टदेवताको स्मरण गर्नुपर्छ । अनि हत्केलामा हेरेर औंलाको टुप्पोमा लक्ष्मी, हत्केलाको मध्यमा सरस्वती र मणिबन्धमा ब्रह्मालाई सम्झेर प्रणाम गर्नुपर्छ । ओछ्यानबाट झर्नुअघ... पूरा पढ्नुहोस्
वास्तुशास्त्र भन्छ- गरीबी र दुर्भाग्य हटाउन यी कुरा घरबाट हटाउनुस् ! वास्तुशास्त्रमा यस्ता धेरै चीजहरूका बारेमा बताइएको छ जसलाई घरमा राख्दा गरीबी र दुर्भाग्य निम्तिन्छ । तपाईंको पनि घर वा पसलमा यी कुरा छन् भने तिनलाई तत्कालै हटाइहाल्नुस् । तपाईंको अनावश्यक खर्च बढिरहेको छ भने वास्तुदोष यसको एक कारण हुन सक्छ । वास्तुशास्त्रमा बताइए... पूरा पढ्नुहोस्
Page 1 of 74 >>